जैतुन विकास केन्द्र बाजुरामै स्थापना हुने
मदनराज जोशी ,बाजुरा । बाजुरामा जैतुन विकास केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत फलफूल विकास निर्देशनालय मार्फत जिल्लामा जैतुन विकास केन्द्र स्थापना हुने भएको हो । कार्यालय कोल्टीमा राखिने संभावना छ । बाजुरा जैतुका लागि देशकै बढी संभावना बोकेको जिल्ला हो । जैतुनको संरक्षण र प्रर्वद्धन गरी व्यवसायीक विकासका लागि केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बताएको छ ।
जैतुन कै प्रवद्र्धन र विकासका लागि भनेर देशम पहिलो पटक बाजुरामा केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । कार्यालय व्वस्थापनका लागि जिल्लामा ९ जनाको दरवन्दी स्वीकृत भई सकेको र १ करोड २८ लाख ६८ हजार रकम निकासा आईसकेको छ । यो रकमबाट भवन निर्माण र जैतुन विकास फर्म स्थापना गरिने छ । भवनका लागि जग्गा छनोट समिति समेत निर्माण गरिएको छ । जसमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम वहादुर शाही संयोजक छन् । भने जिल्ला ईन्जीनीयर जंग वहादुर थापा, नापी कार्यालय प्रमुख उत्तमवावु भण्डारी ,जिल्ला वन कार्यालयका रेञ्जर विशाल लामा, जैतुन फर्म कोल्टीका जनेश भाण्डारी र वागवानी अधिकृत सवीता जोशी सदस्य सचिव रहेको ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । जैतुनको अवस्था अध्धयन तथा अनुसन्धान गर्दै त्यसको व्यवसायीक विकासका लागि राज्यले छुट्टै निकाय मार्फत काम अघि बढाउन खोजेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए । जैतुन महँगो तेल उत्पादन हुने वनस्पती हो ।
केही सुख्खा र हिमाल र पहाड बीचको भूभागमा उत्पादन हुने गरेको जैतुन जिल्लामा प्रर्याप्त मात्रामा रहेको छ । कृत्रिम र प्राकृतिक दुवै जातको जैतुनबाट जिल्लामै तेल समेत उत्पादन गरिएको जैतुन खेतीको विकासमा लागेका अभियान्ता जनेश भण्डारीले बताए । जिल्लामा ३० हजार बढी जंगली प्राकृति जैतुनका बोटहरु रहेको वन कार्यालयको अनुमान छ । भने २० हजार बढी संख्यामा नयाँ बोट कलमी सहित रोपिएका छन् । बाजुरामा प्रमुख कार्यालयकै रुपमा अन्य जिल्लाको अध्ययन र अनुसन्धान तथा विकासका लागि केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । नेपालका बाजुरा पछि डोल्पा, बझांग, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, रुकम र मुस्तागं जिल्लामा जैतुन खेतीको संभावना रहेको छ ।
ती जिल्लामा टुसिया विश्व विद्यालय इटलीले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । उसले सन् २००६ देखि २०१५ सम्म विश्व कृषि तथा खाद्य संगठनको सहयोग मार्फत टी सी पी कार्यक्रम बाजुरामा सञ्चालन गरिरहेको छ । जैतुनको तेल नेपाली बजारमा २५ सय देखि ५ हजार प्रति लिटर विक्री हुने गरेको छ । नेपालले वर्षेनी अर्बै रुपैयाको जैतुनको तेल अन्य देशबाट खरिद गर्ने गरेको छ । जिल्ला कार्यालय स्थापना पछि जैतुन खेतीको विकास र प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने भएको छ । बाजुरामै अन्य जिल्लालाई हेर्न गरी पहिलो पटक कार्यालय स्थापना हुन लागेकोमा जिल्ला बासी खुसी बनेका छन् ।
जैतुन जिल्लाका साप्पाटा, वाई , जगन्नाथ , कोटीला, बाधु, पाण्डुसैन, कोल्टी, मार्तडी, व्रह्मतोला, कैलाशमाडौं जुगाडा लगायतका गाविसमा पाईने गरेको छ । कोल्टी क्षेत्रमा अधिकांश वनहरु जंगली जैतुनकै मात्र छन् । स्थानीय महत्व नबुझ्दा स्याउला दाउराको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको हवस्था छ । हाल कोल्टी स्थित जनप्रकाश उच्च माविमा जैतुनको परिक्षणका लागि खेती सुरु गरिएको छ । जिल्लामा ३० वटा जातहरुकै जैतुनका बोटहरु छन् । जसमा २८ वटा बाहिरबाट विकसित जात ल्याइएको छ, भने २ वटा स्थानीय जातको जैतुनको प्ररिक्षण गरिएको जैतुन फर्म कोल्टीका जनेश भाण्डारीले बताए । जसमा १० जातको जैतुन फल्न थालेको छ । त्यसबाट १६ प्रतिशत तेल एक्सट्रा भर्जीनका रुपमा उत्पादन समेत गरिएको भण्डारीले बताए । जंगली जैतुनबाट समेत ५ प्रतिशत तेल स्थानीय बोटबाट निस्कने गरेको भण्डारीले बताए ।
पछिल्लो समय नेपाल सरकारले पनि चासो दिन थालेको छ । आ.व. २०७१÷ २०७२ मा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम मार्फत बाजुरा जिल्लामा जैतुन खेतीलाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रम उद्योग वाणिज्य संघ मार्फत संञलन भईरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्रमुख डा. रामकृष्ण क्षेष्ठले वताए । जैतुनको विकास गर्न सके जिल्लाको आयआर्जनमा वृद्धी हुने देखिन्छ ।
बढी गरिब बस्ने बाजुरामा जैतुनको प्रवद्र्धन तथा विकासले बेरोजगार युवाहरु समेत काम पाउने देखिन्छ । २१ औं जिल्ला परिषद्बाट बाजुरालाई जैतुनको जिल्लाका रुपमा बाजुरालाई विकास गर्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले आ.वं २०७३÷२०७४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण कार्यक्रममा जैतुन विकास कार्यक्रम राखिएको छ । तर राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम र कार्य विधि स्वीकृत नगरेकाले कार्यक्रम सञ्चालन ढीलो भएको कृषि विकास कार्यालयको भनाई छ ।